Iziphaqulo ezinamakhemikhali ziyingozi kokhulelwe
IKHEMIKHALI elitholakala emikhiqizweni eminingi yokuziphaqula kwabesifazane lingaba yingozi enkulu kwabesifazane abakhulelwe
BONGIWE ZUMA | March 2, 2020
ABESIFAZANE abakhulelwe kumele baziqhelelanise nezinye izinhlobo zezimonyo zokuziphaqula ebusweni ukuze bavikele izingane zabo ezingakazalwa.
Ngokocwaningo olwenziwe eLondon, abesifazane abasebenzisa iziphaqulo ezinekhemikhali ebizwa nge-butyl paraben, kungenzeka babe kwenkulu ingozi yokuzala izingane ezikhuluphele ngokwedlulele.
Le khemikhali ekhona eziphaqulweni eziningi, ingaphazamisa ukwakheka kwengane, iphazamise nokwakheka kobuchopho okungenza ukuthi ingane idle ngokweqile uma isizelwe.
Ososayensi ngesikhathi benza lolu cwaningo, babhekisise abesifazane abakhulelwe abasebenzisa lezi ziphaqulo. Empeleni le khemikhali isetshenziswa ngabenza imikhiqizo yokuzicwala njengento eyenza isiphaqulo sikwazi ukuhlala isikhathi eside.Inezithako ezikwazi ukuvikela amagciwane athile ukuthi angangeni esikhumbeni sakho.
Kepha kuvelile ukuthi le khemikhali ikwazi nokuphazamisa amahomoni kowesifazane okhulelwe kodwa hhayi ngaleyo ndlela.
Amazinga ekhemikhali acwaningwe kwabesifazane abawu-629 nezingane zabo.
Kubhekwe kwahlolwa umchamo wabo base becelwa ukuthi baphendule uhla lwemibuzo ebiyenzelwe lolu cwaningo. Bebebuzwa nokuthi yimiphi imikhiqizo yokuzicwala ubuso abayisebenzisayo ikakhulukazi esontweni lika-34 bekhulelwe.
Ngemuva kokuthi bebelethile, izingane zabo bezikalwa zihlolwe unyaka nonyaka.
Abacwaningi bathole ukuthi omama abebesebenzisa iziphaqulo ezinamazinga aphezulu ale khemikhali emchameni wabo, yibona ababe nezingane eziba nenkinga yokukhuluphala ngokweqile. Lokhu kuqapheleke kakhulu ezinganeni zamantombazane.
Abacwaningi bebeholwa nguTobia Poltre wesikhungo iHelmholtz Centre for Environmental Research eLeipzig, eGermany. Bashicilele lo mbiko kwiNature Communications.
Baphinde baluqhuba nasemagundaneni lolu cwaningo njengoba bethole ukuthi amagundane esifazane ake athintana nalolu hlobo lwekhemikhali, azala amagundane akhonze ukudla.
Ephawula ngalo mbiko, uDkt Alex Polyakov we-University of Melbourne, uthe nokho kuqaphelekile ukuthi kukhona okungafani ngemiphumela yamagundane nabantu.
Uthe kodwa kubalulekile ukuthi abesifazane abakhulelwe bazigweme iziphaqulo ezinale khemikhali.
“Ngingabayala abesifazane ukuthi baziqhelelanise neziphaqulo ezine-paraben. Ukuziqhelelanisa nayo yikona okuzobaphephisa ngoba iziphaqulo akuzona vele ezokuphila,” usho kanje.